Xiaomi Mi MIX 4: Naqshadeynta waxaa lagu muujiyey patent | Androidsis
Si tartiib ah soo saaraha Aasiya ayaa ku sii fidaya Yurub. Xiaomi waxay ku guuleysatay inay boos ka hesho qaybta taleefanka iyadoo soo bandhigtay xalal dhab ah oo dhameystiran qiimaha garaacista. Waxaanan leenahay tusaale cad oo ku saabsan qoyska Mi MIX, aalado leh naqshad aad u fiican qiimo aad u qiimo badan. Oo fiirinaya rukhsadda ugu dambaysa, oo muujin karta naqshadda Xiaomi Mi Mix 4, way iska cadahay in soo saaruhu doonayo inuu faallo cusub siiyo qoyskiisa astaanta ugu badan leh ogolaanshaha Mi 9.
Mid ka mid ah ugu astaamaha Xiaomi Mi MIX 3 waxay ahayd kamaraddeeda oo leh qalab isdaba-joog ah si ay u bixiso muuqaal-shaashad dhan ah, iyada oo aan la helin raad-raaca dhib la'aanta, taas oo ka dhigaysa aaladda mid ka duwan kuwa la tartamaya Iyo, wixii aan awoodnay inaan ku aragno patent-ka cusub ee xaday, Mi MIX 4 wuxuu raaci doonaa raadkii kuwii ka horreeyay.
Fasaxan ayaa xaqiijinaya naqshadeynta Xiaomi Mi MIX 4 oo leh kamarad iskeed u socota
Sida aad ku arki karto sawirka hogaaminaya xariiqyadan, waxaan arki karnaa in nashqadda 'Mi MIX 4' ee Xiaomi ay aad ugu egtahay qaabkii hore. Gaar ahaan waxay ugu wacan tahay xaqiiqda ah inay leedahay qaab isku mid ah oo isdaba-joog ah si loogu isticmaalo kamaraddeeda hore. Oo iska ilaali, sida laga soo xigtay TigerMobiles, isha laga helay qulqulkaan, waxaa jiri doona nooc leh shaashad isku laaban taasna waxay u muuqan doontaa inay haysato kamarad dhan 60 megapixel si ay u bixiso qayb sawir oo aan la qiyaasi karin.
Sida iska cad, waxaan wajaheynaa war xan ah, marka ma xaqiijin karno inay kani noqon doono naqshad qeexan oo ah Xiaomi Mi MIX 4. Haa, waa run inay u egtahay muuqaal weyn haddii aan isbarbar dhig ku sameyno xubinta ugu dambeysa ee qoyska MIX, iyo in xaqiiqda ah in aan lagu darin bucshirada si loo bixiyo shaashad shaashad dhan ay noqoneyso tallaabada ugu macquulsan ee soo saaraha Shiinaha. , laakiin waxay noqon doontaa lama huraan in la sugo soo bandhigideeda rasmiga ah si loo arko waxa shirkada fadhigeedu yahay Beijing ay naga yaabiyeen ka hor inta aan dawanno dawan lagu soo dul tuurin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi » Fasaxan wuxuu muujinayaa naqshadda suurtagalka ah ee Xiaomi Mi MIX 4, oo lala yaabo kamaradda
Lenovo Z6 Pro: Nooc cusub oo heer sare ah